Kuzivikanwa kwenzwi kwePodPod kunosvika muSpain neMexico | IPhone nhau
louis padilla | | HomePod, Noticias
Icho chimwe chezvinhu izvo vashandisi vePambaPod vanga vakamirira kwenguva yakareba, uye ichakurumidza kuwanikwa kuSpain neMexico. Yedu HomePods inozoziva iwo manzwi evazhinji vashandisi, pakupedzisira.
Tinogona pakupedzisira kuve neyedu mimhanzi zvinyorwa pane yedu HomePod. Apple yazivisa mumhepo yanhasi kuti kuzivikanwa kwenzwi kwevanoshandisa vakasiyana kunosvika gore rino munyika dzese dzinotengeswa Apple speaker, kusanganisira Spain neMexico. Nenzira iyi, mushandisi wega wega anogona kushandisa iyo HomePod uye kunakidzwa nemimhanzi yake., pasina kuteerera kune dzimwe nhengo dzemhuri dzinoshandisa zvakare Apple smart speaker.
Nekucherechedzwa kwenzwi, mushandisi wega wega anotaura nePambaPod anowana yavo yega Apple Music mbiri, pamwe nemamwe masevhisi eSiri. Kana iwe ukakumbira mimhanzi, HomePod inozoziva izwi rako uye inokupa iwe mimhanzi yaunofarira zvakanyanya, uye kana ukachengeta rwiyo kana kuudza Siri kuti unoifarira, ichachengetedzwa kune yako mbiri. Pasina zvakare kuteerera kune MUSUNGO wemwanasikana wako wedangwe, kana iyo Reggaetón yesvikiro. Mushandisi wega wega anozove nezwi rake uye nekudaro anokwanisa kuwana mimhanzi yavo. Kwete chete kune mimhanzi, iwe unokwanisa zvakare kuwana ako makarenda akagadzwa uye ako mameseji. Mumwe mushandisi anowana yavo profaili. Kana ikasaziva izwi, unogona kuratidza kuti ndeapi maficha anowanikwa nekutadza.
Apple nhasi yazivisa nyowani HomePod mini inowanikwa mune mamwe mavara, mamwe matsva AirPods 3 uye chirongwa chitsva cheApple Music chinodhura chete $ 4,99 uye icho chinogumira kumidziyo yeApple uye kutonga kwezwi. Pachiitiko ichi chakapawo MacBook Pro nyowani neM1 Pro uye M1 Max mapurosesa, ine simba rine hutsinye uye rinoshandisa simba zvakanyanya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomePod » Kuzivikanwa kwenzwi kwePodPod kunosvika muSpain neMexico munguva pfupi iri kutevera
Apple inogadziridza AirPods Pro kuti ienderane neMagSafe charger